I-SEO Buddy: Uluhlu lwakho lwe-SEO lokuKhangela kunye nezikhokelo zokunyusa ukubonakala kweZinto zakho eziMiselweyo | Martech Zone
The Uluhlu lokujonga lwe-SEO ngu-Buddy we-SEO is indlela yakho kuyo yonke into ebalulekileyo ye-SEO Kuya kufuneka uthathe ukongeza iwebhusayithi yakho kwaye ufumane ukugcwala kwabantu abaninzi. Le yiphakheji ebanzi, ngokungafaniyo nayo nayiphi na into endiyibonileyo kwi-Intanethi, iluncedo olukhulu kumashishini aphakathi ukubanceda baqhubeke nokwenza ngcono iisayithi zabo kunye nokwandisa ukubonakala kwabo kuphando.
Uluhlu lokujonga lwe-SEO lubandakanya
Uluhlu lweeNqaku ezili-102 ze-SEO Uluhlu lokuKhangela kuGoogle
Uluhlu lweeNqaku ezili-102 zoLuhlu lweeSicelo seWebhu
I-eBook enamaphepha angama-62 (PDF)
Inkqubo yeekhalenda zokucwangcisa umxholo weeveki ezingama-52 (PDF)
Uluhlu lokuHlolwa lokuSasazwa kweMixholo engama-50 (Google Sheet)
Ngaphezulu kwe-40 yeenkqubo zokusebenza ezisemgangathweni (SOPs) ekufuneka uzilandele.
Ukuba umtsha kwi-SEO kwaye usokola, i Uluhlu lokujonga lwe-SEO izokunceda uqonde owona mfanekiso mkhulu wento ekufuneka uyenzile ukulungiselela kunye nokubeka indawo. Ngesicelo kunye neespredishithi, uya kuba nakho ukulandela umkhondo wento onayo kwaye ongakhange uyenze ukuze ungaphoswa naziphi na iindlela ezibalulekileyo.
Ayilulo nje uluhlu lwamanqaku ebhulethi, nokuba. Uluhlu lokutshekisha luza namaxwebhu aneenkcukacha ngamanyathelo ngamanyathelo ukuze uqonde ngokuchanekileyo indlela yokwenza inyathelo ngalinye.
Olu ayiluthengi lwexesha elinye, nokuba! I-SEO ihlala iguquka xa uthenga i Uluhlu lokujonga lwe-SEO, uyakufumana ukufikelela kubomi kubandakanya lonke uhlaziyo lwexesha elizayo simahla.
Ukuba uzimisele malunga ne-SEO, esi sisixhobo esimangalisayo. Into endiyithandayo ngayo kukucaca okufumanayo. Kufana nokuzama ukwenza iphazili kwaye ubone umfanekiso okwesihlandlo sokuqala. Uyayazi into ekufuneka yenziwe.
ULouise Green, Umbhalisi
Uluhlu lwe-SEO yokujonga uluhlu
Njengoko iinjini zokukhangela ziguqukile, kukho iindawo ekujolise kuzo ekufuneka ujolise kuzo ukuba unethemba lokufumana ngokupheleleyo ukugcwala kwezinto kwindawo yakho okanye kwivenkile:
SeSiseko -Uzicwangcisa njani ii-analytics, ukulandela amagama akho aphambili, kunye nokulandela umkhondo weetriki kwiGoogle Search Console.
Amava omsebenzisi -Google ikhathalele ngamava umsebenzisi weinjini yokukhangela anayo xa efika kwindawo yakho, ke kuya kufuneka uphucule loo mava.
umxholo -Ukwenza umxholo okhethekileyo, abantu baya kwabelana ngawo, iisayithi ezisemgangathweni ziya kudibana nayo, kwaye uGoogle uya kukubeka.
ukwenza -Funda indlela yokwenza indawo yakho ngokukhawuleza ukuze yonke into ilayishe ngokukhawuleza. UGoogle uthanda iiwebhusayithi ezikhawulezayo.
Kwiphepha le-SEO - Lonke iphepha elikwisiza sakho kufuneka libe lula kwiinjini zokukhangela xa zirhubuluza ukuze zikhombise ngokufanelekileyo kwaye zisetyenziselwe iindwendwe ukuzisebenzisa.
Iphepha elingaphandle le-SEO -Yakha ulwazi kwiwebhusayithi yakho kwaye uqokelele amakhonkco amaxabiso aphezulu ngokufikelela nakumajelo asekuhlaleni ukuqhuba igunya lakho.
Itekhnoloji ye-SEO -Thintela imigibe eqhelekileyo ethintela iinjini zokukhangela ekufumaneni nasekukhombiseni indawo yakho ngokufanelekileyo.
SEO lwengingqi -Lungiselela uluhlu lwakho lwasekhaya kwiinjini zokukhangela kunye nezikhombisi eziphambili apho zombini iinjini zokukhangela ziqinisekisa ulwazi lwakho nalapho abasebenzisi bakufumana khona.
Le ayisiyiyo ikhosi ekwi-Intanethi! Uluhlu lokujonga lwe-SEO luyindlela yoluhlu kunye noluhlu lokutshekisha kwimpumelelo ye-SEO ngayo yonke imixholo oyifunayo ukufezekisa iziphumo eziphezulu ze-SEO!
Sebenzisa ikhowudi yesaphulelo MARTECHZONE
Ukuba ufuna i-25% kwiindleko zoluhlu lokuKhangela lwe-SEO, sebenzisa ikhowudi IMARTECHZONE xa uphuma! Uyakufumana ezinye iibhonasi ezongezelelweyo xa uphuma.
Thenga uluhlu lokujonga lwe-SEO ngu-Buddy we-SEO
Ukubhengezwa: Ndililungu le Umhlobo we-SEO.
tags: ikhowudi yezaphuleloIspredishithi kuGoogleyendawo seongaphandle kwesiza seokwisiza seoUhlobo lokukhangela eziphilayoabasebenzisi beinjini yokukhangelakhangela amava omsebenzisimfondiniUluhlu lokutshekishaucwangciso lomxholoImikhombandlela ye-seoIsikhokelo seoUkucwangcisa okouqeqesho looezobuchwepheshe seo
Ukulungiswa kwenqanaba lokuGuqulwa: Isikhokelo samanyathelo ali-9 kwiRhafu yokuGuqula eyandisiweyo